३ वर्षसम्म चम्किनेछ यी ४ राशिको भाग्य !सुर्यले राशी परिवर्तन गर्दै - Deshko News Deshko News ३ वर्षसम्म चम्किनेछ यी ४ राशिको भाग्य !सुर्यले राशी परिवर्तन गर्दै - Deshko News
३ वर्षसम्म चम्किनेछ यी ४ राशिको भाग्य !सुर्यले राशी परिवर्तन गर्दै
सुर्यले राशी परिवर्तन, सुर्यले राशी परिवर्तन गर्दा कुनै राशिलाई राम्रो फाइदा हुने गर्छ भने कुनै राशिलाई बेफाइदा हुने हुन्छ।कुनै राशि लाभ हुँदा छोटो समय सम्म मात्रै लाभ हुने हुन्छ भने कुनै राशिलाई लामो समय सम्म पनि लाभ कायम रहने हुन्छ।सुर्यको राशी परिवर्तनले विभिन्न चार राशीहरुलाई ३ वर्ष सम्म लाभ दिलाउने हुन्छ।
यी ४ राशीहरु सिंह, कन्या, तुला र कुम्भ रहेका छन्। ३ वर्ष सम्म यी ४ राशीहरुलाई राम्रो समय रहने ज्योतिष शास्त्रमा उल्लेख गरिएको छ।जीवनमा भएका विभिन्न समस्या हाल भएर जान सक्ला। केहि समय देखि हल नभएको आर्थिक समस्या समेत हाल हुने अवस्था आउन सक्ने देखिन्छ।यी राशी हुने व्यक्तिहरुको नबनेको कार्य समेत फत्ते हुने देखिन्छ।स्वास्थ्यको मामिलामा पनि यी ४ राशी हुनेहरुको लागि सुर्यको राशी परिवर्तन शुभ हुनेवाला रहेको छ।
स्वास्थ्यमा भएको सम्पूर्ण विकार हटेर जाने देखिन्छ। अध्ययनमा सफलता हासिल गर्नको लागि खासै दुख गर्नु नपर्ने देखिने भएता पनि शिक्षाको क्षेत्रमा सानो-तिनो पनि लापरवाहीले दुख निम्त्याउन सक्छ। सामाजिक रुपमा प्रतिष्ठा बढ्ने योग बन्न सक्ला भने सामाजिक सम्मान पनि प्राप्त होला।
तर सामाजिक क्षेत्रमा दायित्व समेत बढ्ने हुँदा कार्यबोझ भने बढेको आभास हुन सक्ला। यी ४ राशी हुनेहरुको लागि सुर्य राशी परिवर्तनले पारिवारिक शुख समेत दिलाउन सक्ने देखिन्छ।आर्थिक मामलामा थोरै मात्र संयमता राख्नु भएमा पनि राम्रै लाभ मिल्न सक्ला।सुर्य परिवर्तनले यी ४ राशी हुनेहरुको कुण्डलीमा रहेको नक्षत्रमा विशेष महासंयोग बन्न सहयोग गर्ने हुँदा ३ वर्षसम्म लाभ मिल्ने हुन्छ।
अन्य समाचार :धन, बुद्धि र व्यापार वृद्धि गर्न बुधबार कुन भगवानको व्रत बस्ने ? हिन्दूधर्मशास्त्रअनुसार बुधबारको दिन बुध ग्रहप्रति समर्पित छ । बुधबारको व्रत बुधग्रहको कुप्रभावको शान्तिकामनाका निम्ति एवं धन, बुद्धि, विद्या र व्यापार वृद्धिका लागि पालना गर्ने गरिन्छ । यस दिन विशेष गरी विथाल–देव (कृष्णको अवतार) को पूजा गरिन्छ ।
अन्य समाचार :अहिले जिवित कसैलेपनि नदेखेको दुर्लभ महासंयोग : आउँदैछ असार ३१ गते काठमाडौ । यो बर्षको आषाढ शुक्ल पूर्णिमा तिथिका दिन अर्थात् असार ३१ गते मंगलवार तदनुसार जुलाई १६ तारिखको राती १७ तारिखको विहान करिब १४९ बर्ष पछि जुर्दैछ दुर्लभ महासंयोग । जुन यो युगमा अहिले जिवित कसैले पनि यो संयोग भोग गरेका छैनन् । किनकी १४९ बर्षसम्म जिवित व्यक्ति अहिलेसम्म कोही छैन । खास के हो भने यो बर्ष अति पवित्र दिन गुरु पुर्णिमाकै दिन खण्डग्रास चन्द्रग्रहणु लाग्ने भएको छ ।
अन्य समाचार :हामीले खूबै विश्वास गर्ने ज्योतिष : अाखिर कति भ्रम, कति यथार्थ ? प्रसंग- १ : “चिरिक्क घाम लाग्यो अब एकै छिनमा पानी पर्छ । ल आओ, केटाकेटी हो, पराल थन्क्याउँनु पर्छ ।” माइला बाको कुरा सुनेर कसरा निकुञ्जगेटका दीपक र ममता आफ्ना पिताजीसँगै धान-पराल स्याहार गर्न कस्सिए । नभन्दै पानी छिट्याउन थालेपछि ममताले भनिछन्- हाम्रा बाको ज्योतिष ठ्याक्क मिलेर आउला पो जस्तो छ त !
विकिपिडियाअनुसार, मूलतः काल्पनिक तारापुञ्जको भेदमा बुझी-बुझाई आइएको स्थिर राशी गतिशील ग्रहको सामाञ्जस्यमा कुण्डली निर्धारण गरिन्छ र सम्बन्धित राशीअन्तर्गत ग्रहका स्वभावअनुसार फलदोषजस्ता विभिन्न अर्थहरू खोज्ने गरिन्छ । जस्तो कि, मङ्गल ग्रहको रङ रातो हुन्छ, त्यसैले यसले रिस, युद्ध, लडाईँ आदिको सङ्केत गर्दछ । त्यस्तै वृहस्पतिलाई देवगुरु मानिन्छ र वृहस्पतिले शिक्षा र विद्वताको सङ्केत गर्दछ। वृहस्पति प्रधान भएको व्यक्ति विद्वान हुने भविष्यवाणी गरिआइएको छ ।
शुक्र दानवगुरु हुन् । त्यसैले वृहस्पति शुक्रको शत्रु भयो । शुक्रले यौनको पनि सङ्केत गर्दछ । शुक्र प्रधान हुने व्यक्ति कामवाशाना बढी हुने भनिन्छ। शनी पाप ग्रह हो । यसको प्रभाव पाप कर्ममा हुन्छ । धन पनि एक अर्थले पाप कर्म हो । शनीको प्रभाव भएको बेला धन आर्जन हुने वा खती हुने हुन्छ । चन्द्रमा सुन्दरता, कल्पनाको प्रतीक हो । यसको प्रभावले मान्छेमा सुन्दरता, कल्पनाशीलता आदिको विकास गर्छ, आदि ।
राम्रो हेर्न जानेमा ज्योतिष जीवनको ऐना हो । यो सही जीवनयापनको मार्गदर्शक हो, ज्ञानचक्षु हो।
भूत, भविष्य र वर्तमानको समय र सन्दर्भको कसीमा जीवन पद्दति नियाल्न र गतिविधि निर्क्यौल गर्न सहयोगी विद्या ज्योतिष एक आधारभूत ज्ञान हो। गणितमा आधारित विज्ञान नै भएकाले र आधुनिक विज्ञानले समेत नकार्न नसकेको यो विषय मानवीय ज्ञानको महत्त्वपूर्ण शाखा हो ।